Paris Saint-Germain oo u soo bandhigtay Arsenal isku badalashada Julian Draxler, iyo Matteo Guendouzi
Home Horyaalka France Paris Saint-Germain oo u soo bandhigtay Arsenal isku badalashada Julian Draxler, iyo...
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar isku bedelasho u dhaxeysa Julian Draxler iyo ciyaaryahanka khadka dhexe Matteo Guendouzi .
Gunners ayaa ku dhow inay heshiis amaah ah kula soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Martin Odegaard ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka, taasoo keentay in Mikel Arteta uu si fiican ugu xirnaado xulashooyinka aagga garoonka ilaa xagaaga.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay L’Equipe , PSG ayaa dooneysa inay xiriir la sameyso Arsenal oo ku saabsan heshiis ku lug leh Draxler iyo Guendouzi.
Iyagoo markhaati u ah Guendouzi inuu dib ugu soo nooleeyay mustaqbalkiisa amaahda Hertha Berlin, kooxda reer France ayaa xiiseyneysa inay lasoo saxiixato 21 jirkaan xilli uun 2021.
Si wax looga dhimo dhaqaalaha qaar, PSG ayaa la sheegayaa inay diyaar u tahay Draxler inuu u dhaqaaqo garoonka Emirates ka hor dhamaadka bisha Janaayo.
Draxler, oo qandaraaskiisa uu ka dhacayo shan bilood gudahood, ayaa la siiyay kaliya 31 daqiiqo oo kubada cagta ah tan iyo markii dhawaan loo magacaabay Mauricio Pochettino .
Previous articleBruno Fernandes oo shaaca ka qaaday in Edinson Cavani uu u sheegay halka uu ku toosinayo laadkiisa xorta ahaa
Next articleQaar ka mid ah taageerayaasha Manchester United oo soo dhaweyay bandhigii Marcus Rashford ee kulankii Liverpool